Ezemidlalo Ukudla Ukulahlekelwa isisindo Okufakiwe Okubomvu
Ukudla, okubizwa ngokuthi "obomvu", njengoba ungakwazi ukuqagela kalula, uthole "igama" layo ngoba kubandakanya imikhiqizo ebomvu kuphela. Imifino, izithelo, amajikijolo, izilwane zasolwandle, ubhontshisi kuvunyelwe. Isimo esisodwa kuphela: yonke imikhiqizo kumele ibe nebomvu kuphela. Lokhu kuhlanganisa utamatisi, beet, ama-radishes, iklabishi ebomvu, pepper yesiBulgaria, cherry, ama-cherries, ama-cherries, ama-strawberries, ama-currants, ama-cranberries, ama-cranberries, amahalananda, ama-apula, ama-nectarini, ubhontshisi obomvu, i-lentile ebomvu, izinhlanzi ezibomvu, ama-shrimp, i-caviar ebomvu.
Ukudla okubomvu kuklanyelwe izinsuku ezinhlanu, ukulahlekelwa isisindo, okungafinyelelwa ngosizo lwaso - amabili noma amathathu kilogram.
Imenyu yesampula ngokudla okubomvu
Ukudla kwasekuseni: ikhofi esanda kuphuzwa noma itiye eluhlaza ngaphandle kokushukela, okungenani ongakwazi ukukukhokhela - isipuni sejuju, uma ungakwazi ngempela ukucabanga impilo yakho ngaphandle kokumnandi.
Ukudla kwasekuseni kwesibili: ama-strawberries ambalwa.
Kwasemini: pepper obomvu waseBulgaria noma utamatisi, itiye le-karkade ne-isipuni leju.
Phakathi nesidlo se-mid-ntambama: i-sitrobheli noma i-apula enkulu ebomvu.
Ukudla ukudla: ama-strawberries ambalwa kanye ne-kefir eyodwa.
Ukudla kwasekuseni: ikhofi noma itiye elihlaza.
Ukudla kwasekuseni kwesibili: ama-cherries ambalwa noma ama-cherry amnandi.
Kwasemini: isaladi ye-utamatisi, i-bell pepper ne-radishes ngamafutha omifino amancane, ucezu lwezinhlanzi ezibomvu.
Ukudla okuphakathi kwamabili ntambama: okukhethwa kukho yi-cherry, cherry noma ama-nectarine amabili.
Ngesidlo: ubisi oluboshiwe, ambalwa ama cherry noma ama cherry amnandi.
Ukudla kwasekuseni: itiye le-karkade noma ikhofi esanda kuphuzwa.
Ukudla kwasekuseni kwesibili: i-currants ebomvu.
Kwasemini: iklabishi ebomvu, egqoke ngamafutha yemifino noma omnqumo, itiye eluhlaza.
Phakathi kwesidlo se-ntambama-ntambama: i-currant ebomvu noma igromegranate.
Ukudla: i-kefir, i-currant ebomvu.
Ukudla kwasekuseni: itiye eluhlaza noma ikhofi.
Ukudla kwasekuseni kwesibili: i-raspberries encane.
Kwasemini: Pepper yesiBulgaria, u-anyanisi obomvu, utamatisi, udoti emanzini, itiye eluhlaza.
Ukuze uthole isiphuzo: ama-raspberries noma amapheya amabili abomvu.
Ukudla ukudla: ubisi obomvu, ama-shrimp ambalwa noma i-caviar encane ebomvu, i-raspberries encane.
Ukudla kwasekuseni: ikhofi noma itiye.
Ukudla kwasekuseni kwesibili: ama-cranberries amancane noma ama-cranberries.
Kwasemini: isaladi ye-utamatisi, isithombo, iklabishi ebomvu, i-crocade.
Ukuze uthole isiphuzo: ama-cranberries, i-cranberries noma i-apula enkulu ebomvu.
Ngokuba ukudla: kefir, amaqanda abilisiwe kanye amajikijolo.
Uma uthola lokhu kudla kakhulu, ungandisa inani lemifino ebomvu ngesidlo sasemini, nganoma yisiphi isikhathi uphuze i-cherry, utamatisi noma igranate ijusi, kodwa ngaphandle kokushukela. Uma uhileleka ngokweqile emidlalweni noma uhola impilo yokusebenza, ungakwazi ukwengeza ubhontshisi obomvu ekudleni kwakho noma ngamalenti amnyama, mhlawumbe ngesidlo sasemini, ubeke esikhundleni semifino. Lezi zinhlayiya zicebile amaprotheni nensimbi, futhi yizinto ezidingekayo ekulahlekelweni kwesisindo. Ngaphezu kwalokho, ubhontshisi nama lentile aqukethe amakhilogremu ambalwa, futhi aphindwe kathathu.
Izinzuzo kanye nokuqeda ukudla "okubomvu"
Izinzuzo zalokhu kudla ukuthi iqukethe ukudla okuphansi kwekhalori, kodwa ecebile kakhulu ku-beta-carotene no-vitamin C, ikakhulukazi lokhu kudla kuhle kakhulu entwasahlobo lapho umzimba udinga amavithamini. Iningi lemifino nezithelo kusiza ukuhlanza umzimba.
Ukungahleleki kokudla okubomvu, ngokuyinhloko ekuswelekeni kwayo - akuwona wonke umuntu ongakwazi ukulwa nokudla okulinganiselwe. Ngaphezu kwalokho, iqukethe amaprotheni amancane namafutha, ngakho akufanelekile ukuyibeka ezinsukwini ezingaphezu kwezinhlanu. Ukwengeza, inani elikhulu lamajikijolo nezithelo ezibomvu lingabangela ukubola.
Ngaphambi kokuba uhlale ekudleni okubomvu, kufanele uxoxisane nomuntu onomsoco noma okungenani uhlole ukuhlolwa kwezokwelapha, ngoba inqwaba yokudla okuyi-acidic (currants, utamatisi, cherry, i-cranberries, njll.) Ingasusa izifo zakho ezikhona zomuthi wamathumbu.
Isiyinkimbinkimbi sokuzivocavoca kwabesifazane ekuzivocavoca komthwalo we-cardio
Izindlela eziphumelela kakhulu ze-cellulite
Indlela yokuqala ukulahlekelwa isisindo: iseluleko somsoco, isazi sezengqondo
I-Potato Diet kanye neNsiza Yayo
Ukudla okuqinile ukulahlekelwa isisindo esisheshayo: Susa izinhlangothi ngesonto
I-Catfish steak nemifino
Izakhiwo eziwusizo nokusetshenziswa kwezikhwama zezimvu emithi
Isimo sezulu eMoscow ngoJuni 2016: ukulungiselela ihlobo ngokushelelayo!
Ukudla okunomsoco nokuvivinya umzimba
Kungani amadoda engakwazi ukuyeka ukubhema?
I-compote yama-apricot omisiwe
Izindlela zokuthola isimo se-fetus
Ikhalenda lezinwele zokukhanga zonke izinsuku: Januwari 2014